Amathiphu angu-5 Awusizo Okugwema Izinhlobo Ezivame Kakhulu Zobugebengu Baku-inthanethi | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Amathiphu angu-5 Awusizo Okugwema Izinhlobo Ezivame Kakhulu Zobugebengu Baku-inthanethi
Shiya amazwana / ummeli, Blog, amacala enkantolo, Izindaba / By Sarah
I-Cybercrime isho ukwenziwa kobugebengu lapho i-inthanethi iyingxenye ebalulekile noma isetshenziselwa ukwenza lula ukwenziwa kwayo. Lo mkhuba uye wanda eminyakeni engu-20 edlule. Imithelela yobugebengu bamakhompuyutha ivamise ukubonwa njengengenakuhlehliswa kanye nalabo ababa izisulu. Nokho, zikhona izinyathelo ongazithatha ukuze uzivikele ezigebengwini ze-inthanethi.
Ungazigcina kanjani uphephile ezinhlotsheni ezivame kakhulu zobugebengu be-inthanethi
Ngezansi ezinye izinyathelo zokuphepha ezingakusiza ukukugcina uphephile ezinhlotsheni ezivame kakhulu zobugebengu bamakhompuyutha:
Ukwebiwa komazisi kuwubugebengu obuhlanganisa ukusebenzisa imininingwane yomuntu siqu yomunye umuntu ukwenza imisebenzi engekho emthethweni. Lolu hlobo lobugebengu be-inthanethi lwenzeka lapho imininingwane yakho yomuntu siqu yebiwa futhi isetshenziswa izigebengu ukuze kuzuze imali.
Nazi izindlela ezivame kakhulu zokwebiwa kobunikazi:
Ukwebiwa kobunikazi bezezimali: ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwamakhadi esikweletu, izinombolo ze-akhawunti yasebhange, izinombolo zokuphepha komphakathi, njll.
Ukwebiwa kobunikazi bomuntu siqu: usebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ukwenza imisebenzi engekho emthethweni njengokuvula ama-akhawunti e-imeyili nokuthenga izinto ku-inthanethi.
Ukwebiwa kobunikazi bentela: usebenzisa inombolo yakho yezokuphepha komphakathi ukuze ufake izimbuyiselo zentela ezingamanga.
Ukwebiwa kwezazisi zezokwelapha: usebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ukuze ufune usizo lwezokwelapha.
Ukwebiwa kobunikazi bomsebenzi: ukweba imininingwane yephrofayili yakho yendawo yokusebenza ukuze wenze imisebenzi engekho emthethweni.
Ukwebiwa kwemininingwane yengane: usebenzisa imininingwane yengane yakho ukwenza izinto ezingekho emthethweni.
Ukwebiwa komazisi abakhulu: ukweba ulwazi lomuntu siqu lwabantu abadala ngamacala ezezimali.
Indlela Yokugwema Ukwebiwa Kobunikazi
Hlola ama-akhawunti akho asebhange njalo ukuze uqinisekise ukuthi azikho izinto ezisolisayo.
Ungaphathi ikhadi lakho lokuvikela umphakathi esikhwameni sakho.
Ungabelani ngemininingwane yakho yomuntu siqu nezithombe kubantu abangaziwa ku-inthanethi ngaphandle uma kudingekile
Gwema ukusebenzisa iphasiwedi efanayo kuwo wonke ama-akhawunti.
Dala amagama ayimfihlo aqinile aqukethe osonhlamvukazi nabancane, izinombolo, izimpawu, njll.
Nika amandla ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili kuyo yonke i-akhawunti onayo.
Shintsha iphasiwedi yakho njalo.
Sebenzisa isofthiwe ye-antivirus ehlanganisa ukuvikela ukuntshontshwa kobunikazi.
Gada amaphuzu akho esikweletu kanye nokuthenga ukuze uthole noma yiziphi izimpawu ezingaba khona zokukhwabanisa.
Ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi bungenye yezinhlelo ezivame kakhulu zobunjiniyela bomphakathi ezisetshenziswa izigebengu ukuze uthole ukufinyelela kulwazi lwakho oluyimfihlo njengezinombolo ze-akhawunti yasebhange, amagama ayimfihlo, njll. Into kuphela okudingeka uyenze ukuchofoza isixhumanisi, kodwa kwanele ukukufaka enkingeni. . Uma ucelwa ukuthi uqinisekise ulwazi lwe-akhawunti yakho yasebhange ku-inthanethi, izigebengu ze-inthanethi zeluleka abasebenzisi ukuthi bachofoze izixhumanisi ezibonakala zithembeke kakhulu. Ngenxa yokuthi abantu abaningi abazazi izinsongo ezihilelekile ekuchofozeni izixhumanisi noma ekuvuleni amafayela athunyelwe abathumeli abangaziwa, baba izisulu futhi balahlekelwe yimali yabo.
Ungazivikela Kanjani Kubugebengu Bokweba imininingwane ebucayi
Ukuze ugweme ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, kufanele uqaphele izixhumanisi ozichofozayo, futhi uhlale uhlola ukuthi umlayezo osemthethweni yini. Futhi, vula isiphequluli sakho, ngena ku-akhawunti yakho yasebhange ngokuqondile esikhundleni sokuchofoza izixhumanisi ezithunyelwe umthumeli ongaziwa.
I-Ransomware iwuhlobo lohlelo olungayilungele ikhompuyutha olukhiya noma olubethela amafayela akho namadokhumenti futhi lufune imali yokuwabuyisela efomini lawo langempela. Yize ekhona amathuluzi amahhala okukhipha ukubethela atholakalayo, izisulu eziningi zincamela ukukhokha isihlengo ngoba kuyindlela esheshayo yokuphuma enkingeni.
Ungazivikela Kanjani Ku-Ransomware
Ukuze ugweme i-ransomware, kufanele uqaphele kakhulu ngalokho okuvulayo nokuchofoza kukho ngama-imeyili noma amawebhusayithi. Akufanele neze ulande ama-imeyili noma amafayela avela kubathumeli abangaziwa futhi ugweme izixhumanisi nezikhangiso ezisolisayo, ikakhulukazi uma zikwenza ukhokhele amasevisi ngokuvamile amahhala.
Ukuhlukunyezwa Ku-inthanethi, I-Cyberstalking, Nobuxhwanguxhwangu
Ukuhlukunyezwa ku-inthanethi kanye nobuxhwanguxhwangu ku-inthanethi ngenani elikhulu lobugebengu bamakhompuyutha futhi ngokuvamile kuqala ngokubiza amagama abantu ngamagama noma ubuxhwanguxhwangu base-inthanethi, kodwa kancane kancane kuphenduke ukucupha ku-inthanethi kanye nezinsongo zokuzibulala. Ngokwe-Bureau of Justice Statistics yase-US, ingane eyodwa kwezine iyisisulu sokuxhashazwa ku-inthanethi. Imiphumela engokwengqondo njengokucindezeleka, ukukhathazeka, ukuzethemba okuphansi, njll. imiphumela emikhulu yalobu bugebengu.
Uhlala Kanjani Uphephile Ekuhlushweni Ku-inthanethi Nobuxhwanguxhwangu
Uma uzwa sengathi othile uyakuhlukumeza ku-inthanethi, ukumvimba kuzosiza ukumisa ukuhlukumeza futhi kugweme ukulimaza impilo yakho yengqondo.
Gwema ukwabelana ngolwazi lwakho lomuntu siqu nabantu ongabazi ezinkundleni zokuxhumana naku-inthanethi.
Gcina isofthiwe yakho yezokuphepha ibuyekeziwe futhi usebenzise ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili ukuze uvikele ama-akhawunti akho.
Ungayiphenduli imilayezo ekwenza uzizwe ungakhululekile noma wethukile, ikakhulukazi uma ikhuluma ngezocansi ingcaca. Vele uzisuse.
Izinkundla zokuxhumana ezifana ne-Facebook, Instagram, Twitter, njll. azikubekezeleli ukuhlukunyezwa kwanoma yiluphi uhlobo kumawebhusayithi abo futhi ungavimba umuntu kulezi zingosi ukuze agweme ukubona imiyalezo yakhe.
Ukuthengisa nge-inthanethi kuyibhizinisi elithembisayo. Kodwa-ke, kufanele unake abakhohlisi nabakhwabanisi abafuna ukuthi ubathumelele imali futhi uveze ulwazi lomuntu siqu. Ezinye izindlela ezijwayelekile zokuqola ku-inthanethi:
Ukuphishingana: ukuthumela imilayezo ezenza iwebhusayithi esemthethweni ukucela imininingwane yakho yokungena noma izinombolo zekhadi lesikweletu.
Izincomo ezingamanga: imilayezo ibonakala sengathi ivela kumakhasimende anelisekile kodwa empeleni ifuna ukuthi uthenge imikhiqizo namasevisi angalimaza ikhompuyutha yakho noma ulwazi lomuntu siqu.
Ukukhwabanisa kwe-Cryptocurrency: bakucela ukuthi utshale imali kuma-cryptocurrencies futhi udlulisele imali kuma-akhawunti abo ngoba bangathola inzuzo enkulu.
Ukwebiwa Kwemazisi: ukunikeza imisebenzi edinga ukuthi ukhokhe imali ethile kusengaphambili ukuze uthole ukuqeqeshwa, izindaba zama-visa, njll.
Amathiphu Okugwema Imikhonyovu Yaku-inthanethi Nokukhwabanisa
Sebenzisa ukuqinisekiswa kwezinto ezi-2 ukuze uvikele ama-akhawunti akho.
Hlala ubheke abantu abangafuni ukuhlangana nawe ubuso nobuso ngaphambi kokuthenga.
Ungalidaluli ulwazi lomuntu siqu ngaphandle kokuba nolwazi olwanele ngomuntu noma inkampani elucelayo.
Ungadluliseli imali kubantu ongabazi.
Ungayithembi imilayezo evela kubantu abathi bamele isevisi yamakhasimende uma umlayezo ubuza imininingwane yakho yokungena noma izinombolo zekhadi lesikweletu.
Ubuphekula be-Cyber ​​buchazwa njengezenzo zamabomu zokudala ukwesaba okusabalele ngokudala ukudideka, ukulimala kwezomnotho, abalimala, njll. ngokusetshenziswa kwamakhompyutha ne-inthanethi. Lobu bugebengu bungabandakanya ukwethulwa kokuhlasela kwe-DDoS okukhulu kumawebhusayithi noma izinsiza, ukuduna amadivaysi asengozini kuma-cryptocurrensets, ukuhlasela ingqalasizinda ebalulekile (amagridi kagesi), njll.
Amathiphu Okugwema Ubuphekula Be-Cyber
Qinisekisa ukuthi isofthiwe yakho yezokuphepha, isistimu yokusebenza, namanye amadivayisi abuyekezwa abe yizinguqulo zakamuva.
Qaphela ukuziphatha okusolisayo eduze kwakho. Uma kukhona ofakaza ngakho, kubike kwabomthetho ngokushesha.
Gwema ukusebenzisa amanethiwekhi omphakathi e-WiFi njengoba asengozini yokuhlaselwa njengobugebengu bokweba imininingwane ebucayi kanye nokuhlasela kwe-man-in-the-middle (MITM).
Yenza ikhophi yasenqolobaneni yedatha ebucayi futhi uyigcine ingaxhunyiwe ku-inthanethi ngokusemandleni akho.
I-Cyberwarfare iwuhlobo lwempi yolwazi eyenziwa ku-inthanethi, njenge-inthanethi noma enye inethiwekhi yekhompyutha ngokumelene nesinye izwe noma inhlangano. Lokhu kungafezwa ngokusebenzisa ubunhloli be-cyber ukuqoqa ubuhlakani, inkulumo-ze ukuze ithonye umphakathi
Kunzima ukubhekana nobugebengu be-Cyber ​​ngoba kwenzeka nge-inthanethi. Kusha futhi futhi awekho amazwe amaningi anemithetho ecacile yokuthi yini engenziwa kulawa macala, ngakho-ke uma uhlangabezana nezinkinga ezifana nalezi kungangcono ukhulume nommeli ngaphambi kokuthatha isinyathelo ngokwakho!
Abameli abanekhono lobugebengu be-inthanethi kwa-Amal Khamis Advocates kanye Nabeluleki Bezomthetho e-Dubai bangakweluleka ngesimo sakho futhi bakuqondise enqubweni yezomthetho. Uma unanoma yimiphi imibuzo ehlobene neCybercrimes, xhumana nathi namuhla ukuze uthole ukubonisana!
Indlela Yokukhulisa Izimangalo Zobungozi Bokuzilimaza Komuntu E-Dubai noma e-United Arab Emirates?
I-Proceedings of UAE Lawyers in Ukuqoqa Izikweletu
Ingabe Uhlukunyezwa Kokuphuza Nokushayela Izingozi E-UAE?
Ukukhetha Ummeli Ongcono Kakhulu Wesehlukaniso eDubai
Roger on Imithetho yokuphuza nokushayela eDubai noma e-UAE: Abashayeli Kumele Bahambisane Nomthetho ukugwema Ukujeziswa Okuqinile
i-Legalbridge-admin on Izigaba ze-Assault Cases